Fonosana Dite Ho An'ny Dite
Asabotsy 26 Jona 2021
Fonosana Dite Ho An'ny Dite Tea Hall Brand, maka ny sarin'ny fitrandrahana sy fampielezana ny dite maimaimpoana sy tsy misy fangarony, ny foto-kevitry ny fizotran'ny dite, matanjaka na malemy, manova tsy ampoizina, toy ny singa manoratana dite rehefa manandrana dite. Ny manaitra ny fisotroana dite ho toy ny ranomainty ary mampiasa ny rantsan-tànana toy ny penina, manao sary an-tsaina ny saina manitatra ny fisotroan-doko ao amin'ny fianakaviana hall miaraka amin'ny kianja. Ny famolavolana fonosana tany am-boalohany dia miteraka rivo-piainana mahafinaritra, mampiseho ny fotoana mahafinaritra amin'ny fiainana miaraka amin'ny dite.
Ny Fampiroboroboana Marika
Ny Fampiroboroboana Marika Projet mavo dia tetikasan'ny zavakanto mahomby izay mandrafitra ny fomba fijerin'ny zava-drehetra ny mavomavo ny zava-drehetra. Raha ny fahitana lehibe dia hisy fampisehoana an-kalamanjana lehibe hatao any amin'ireo tanàna isan-karazany, ary andiany kolontsaina sy famoronana no vokarina miaraka amin'izany. Amin'ny alàlan'ny IP ara-tsarimihetsika, ny Project Yellow dia manana sary maso manintona ary fomba fanaovana loko mavitrika hamolavola fomba fijery iray mampiray, izay mahatonga ny olona tsy hay hadino. Mety ho fampiroboroboana an-tserasera midadasika sy ivelan'ny serivisy, ary ny vokatry ny derivatives hita maso dia tetik'asa famolavolana tokana.
Ny Famolavolana Ip-Visual
Alakamisy 24 Jona 2021
Ny Famolavolana Ip-Visual Projet mavo dia tetikasan'ny zavakanto mahomby izay mandrafitra ny fomba fijerin'ny zava-drehetra ny mavomavo ny zava-drehetra. Raha ny fahitana lehibe dia hisy fampisehoana an-kalamanjana lehibe hatao any amin'ireo tanàna isan-karazany, ary andiany kolontsaina sy famoronana no vokarina miaraka amin'izany. Amin'ny alàlan'ny IP ara-tsarimihetsika, ny Project Yellow dia manana sary maso manintona ary fomba fanaovana loko mavitrika hamolavola fomba fijery iray mampiray, izay mahatonga ny olona tsy hay hadino. Mety ho fampiroboroboana an-tserasera midadasika sy ivelan'ny serivisy, ary ny vokatry ny derivatives hita maso dia tetik'asa famolavolana tokana.
Ny Famolavolana Anatiny Ny loko volony dia heverina ho mankaleo. Saingy ankehitriny, ity loko ity dia iray avy amin'ny loha-lakan-doko amin'ny fomba toa ny loft, minimalism ary hi-tech. Ny loko fotsy volo dia loko tiana ho an'ny fiainana manokana, milamina ary fialan-tsasatra. Ny ankamaroany dia manasa ireo, izay miara-miasa amin'ny olona na manao fangatahana cognitive, amin'ny loko anatiny amin'ny ankapobeny. Fotsy volo ny rindrina, valindrihana, fanaka, ambainy ary ny gorodona. Hues sy saturation ny fotsy volo dia tsy mitovy. Nampiana sarina sy akany fanampiny ny volamena. Nohazavaina tamin'ny alàlan'ny sary sary.
Talata 22 Jona 2021
Ny Ny aingam-panahy ho an'ny famerenana indray sy ny famoronana ny marika dia ny fiovana amin'ny fanavaozana sy ny fampidirana ao anatin'ny kolontsain'ny orinasa. Ny famoronana fo dia mety tsy ho ivelany ivelan'ny marika ihany koa, manentana ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny mpiasa, fa amin'ny mpanjifa ihany koa. Firaisana iraisana eo amin'ny tombontsoa, fanoloran-tena ary ny kalitaon'ny serivisy. Avy amin'ny endrika ka hatrany amin'ny loko, ny endrika vaovao dia nampiditra ny fo ho any amin'ny B sy ny fahasalamana ara-pahasalamana ao amin'ny T. Ny teny roa dia niara-nitaona teo afovoany ka nahatonga ny sary ho toy ny teny iray, famantarana tokana, mampiray ny R sy B in ny fo.
Ny Famoronana Marika
Ny Famoronana Marika Ny endrika ho an'ny marika EXP Brasil dia avy amin'ny fitsipika momba ny firaisana sy ny fiaraha-miasa. Fanolorana ny fifangaroana eo amin'ny teknolojia sy ny famolavolana ny tetikasan'izy ireo toy ny eo amin'ny fiainan'ny birao. Ny singa typography dia maneho ny firaisana sy ny herin'ity orinasa ity. Ny famoronana taratasy X dia mivaingana ary mitambatra nefa maivana sy haitao ara-teknolojia. Ny marika dia maneho ny fiainana studio, miaraka amin'ireo singa ao amin'ireo taratasy, na eo amin'ny sehatra tsara sy ratsy izay mampiray ny olona sy ny famolavolana olona, ny olona tsirairay ary mitambatra, tsotra amin'ny teknolojia, maivana ary matevina, matihanina ary manokana.
Quaint and Quirky Ny Kafe Anatiny Dia Endrika Alahady 1 Aogositra
Aoxin Holiday Trano Fandraisam-Bahiny Asabotsy 31 Jolay
Superegg Ny Fametahana Sary Sokitra Zoma 30 Jolay
Fonosana Dite Ho An'ny Dite Ny Fampiroboroboana Marika Ny Famolavolana Ip-Visual Ny Famolavolana Anatiny Ny Ny Famoronana Marika